Wax Badan ka Ogow Dowlada Qatar iyo Saameynta ay Dunida ku leedahay. – Xeernews24
Wax Badan ka Ogow Dowlada Qatar iyo Saameynta ay Dunida ku leedahay.
Qadar oo ah dal yar oo qani ah isla markaana dadkiisu Sunniyiin yahiin, waa dal aad ugu dedaala in uu yeesho madaxbannaani siyaasad-dibedeed, waxuuna xoogga saaraa in ay danta dalkooda ka horeysiiyaan wax kasta oo kale.
Waxay isu-qabaan in ay leeyihiin awood ay ku saamayn karaan gobolka Bariga Dhexe iyo adduunkaba. Waxay ku dedaalaan siyaasad furfuran oo ku-dhac ama geesinimo leh.
Waxay xuduud la wadaagaan Sacuudiga, waxayna ka mid yihiin ururka gacanka ee marka magaciisa la soo gaabiyo la yiraahdo “GCC” ee ay ku midaysan yihiin Waddammada Gacanka Carabtu.
Qadar waxa deggan oo saldhig ku leh Dalka Mareykanka, iyaga oo marti geliyey 10,000 toban kun oo askari iyo Xarunta maamulka Dhexe ee Ciidanka Mareykanka ee loo yaqaan Central Command. waxay kaloo xidhiidh dhow la leedahay Dawladda Iiraan, waxaana xidhiidhkaasi uu koobsadaa dhaqaale, siyaasad, istaraatijiyad iyo ammaanba.
Waxaa xusid mudan in xidhiidhka Qadar la leedahay Iiraan uu fure u noqday wada-xaajooddyo badan oo qaarkood la isku dhaafsaday maxaabiis ay kala qabsadeen kooxaha dagaalka mad’habeed ee ku diriraya Bariga Dhexe iyo kooxaha kale ee dagaallada siyaasadeed isku hor fadhiyaaba.
Waxaa jirta in Sannadkii 2016-kii waxa magaalada Doha uu ka dhacay wada-hadal loogu magac-daray “Wada-xaajoodkii Qadar” waxaana isku soo hor-fadhiistay Mareykanka, Pakistan, Taliban iyo Afghanistan, waxana laga wada hadlay ammaanka iyo nabadda Afganistan, halkaas oo ay Taliban ku dhiibatey dalabaad ay ka mid ahaayeen in loo sii daayo maxaabiis ka xidhan iyo in qaar ka mid ah madaxdeeda laga saaro liiska madow ee Qarammada Midoobey.
Waxaa kale oo la xaqiijiyey in xafiiska Taliban ee ku yaal Qadar uu fududeeyey is-dhaafsi maxaabiis ay dagaal ku kala qabsadeen Mareykanka iyo Taliban, inkasta oo arrimahaasi ahaayeen kuwo si hoose loo dhammeeyey haddana waxay ku tusaysaa saamaynta dalkan yar ee Qadar iyo xeel-dheeraanteeda dawladnimo.
Mar kale, Dawladda Qadar waxay xidhiidh laba-geesood ah la leedahay dawladda Israel ee ay colka yihiin Carabta kale. Aynu xusno in dhowaan markii Qadar ku guulaysatey in ay koobka Kubadda Cagta ee adduunka marti-geliso Sannadka 2022-ka Israel iyo Qadar waxay si wada-jir ah u dhisteen Garoon kubadeed oo loogu magac-darey caasimadda Qadar loona bixiyey “Doha Stadium” kaas oo laga dhisay magaala-Carbeedda Sakhnin ee Gobolka Galilee ee waddanka Israel.
Dhinaca kale, sida laga helay ilo Lubnaaniyiin ah, dawladda Qadar waxay dhowaan dagaallada Yemen ka socda ka soo samata-bixisay kooxo asal ahaan Yuhuud ah, basle Yamaniyiin ah oo dagaallada meeshaa ka socda ku xannibmey, waxay u soo daad-gureysey Doha, kadibna waxay u sii gudbisey Israel, xiriiradan iyo kuwa kale ee dhex mara labada dal waxay ku tusayaan isku-dhowaanshaha labada dhinac; iyada oo sidaas ah, haddana Dawladda Qadar waxa marar badan ka cawday Israel isla markaana waxay ku eedeeyey in ay maalgeliso kooxda Xamaas ee dagaalka ba’ani kala dhexeeyo Israel. Arrimahan ayaa dawladda Qadar ka dhigaya dal xeelad fog, lehna isku-wadka arrimo kala durugsan.
Si kastaba ha ahaatee, Dawladda Qadar waxay u muuqataa dawlad leh xirfad iyo xiriiro diblomaasi dawladdeed qoto dheer dheer, dalal badan oo ay ugu horeeyaan xulafada Sacuudigu waxa ay la yaabban yihiin dalkan yar ee carbeed ee aan la saadaalin karin, waxaana Dawladda Sucuudiga iyo xulafadeedu ay Qadar u arkaan dal aan iyaga u qabsoomin, lehna qorsheyaal siyaasadeed oo kuwooda ka duwan iyo madaxbannaani siyaasad-dibedeed, isla markaana aan la odorosi karin, Waa sababta marar badan aad u maqasho dhacdooyin diblomaasiyadeed oo taban oo ka dhex-qarxa Qadar iyo huwanta Carbeed ee kale, iyaga oo marmarka qaar gaara inay si taban u wada hadlaan.
W/Q: Abdirashid Jeeni
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/doha.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-06-13 11:10:112017-06-13 11:10:11Wax Badan ka Ogow Dowlada Qatar iyo Saameynta ay Dunida ku leedahay.
XOG: 7-Mashruuc oo Sacuudigu Soomaalia ka fulin lahaa oo Xiisada Qatar Darteed...